सुशान्तको निधनले सलमान खानलाई लाग्यो ठुलो चोट – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुशान्तको निधनले सलमान खानलाई लाग्यो ठुलो चोट
लिउडका युवा अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले देहत्याग गरेपछि बलिउड यतिबेला शो’कमा डु’बेको छ । बलिउड अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुले उनको निधनमा ग’हिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । राजपूतको निधनलाई लिएर बलिउडका स्टारहरुले एक असल कलाकार गुमाएमा दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् ।
बलिउडका अभिनताे सलमान खानले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सधैँ सम्झनामा रहिरहने बताएका छन् । मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा सुशान्त आइतबार पा सो ल गाएर झू ण्डिएको अवस्थमा मृत फेला परेका थिए । राजपुत लकडाउनको समयमा बान्द्रास्थित अपार्टमेन्टमा एक्लै बस्थे। उनी केही समय यता डि प्रेसनमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
चलचित्र ‘धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’का कारण चर्चामा रहेका सुशान्तको यो चलचित्रले भारतको बक्स अफिसमा सय करोड माथिको व्यापार गरेको थियो । जसले गर्दा पनि उनलाई धेरै गुगलमा खोजिएको बताइएको छ । त्यस्तै टीभी कलाकार अंकिता लोखन्डेसँगको व्रेकअपका कारण झनै बढी चर्चामा आएका सुशान्त नायिका कृती सेननसँगको प्रेम चर्चाले झनै बलिउडमा चुलिए ।
त्यस्तै प्रख्यात अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले चर्चित भारतीय कलाकार सुशान्त सिंह राजपुतले खबर सुन्दा आफू स्तब्ध भएको बताएकी छन्। ‘यो सुन्दा म निकै स्तब्ध भएँ… बिभिन्न विषयमा उनले गर्ने बहस म निकै मन पराउँथेँ… मेरो हार्दिक समवेदना! ओम शान्ति…,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेकी छन्।
मुम्बई प्रहरी अहिले उनको घरमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनी ६ महिनादेखि डिप्रेसनमा रहेको भन्दै प्रहरीले डि प्रेसनकै कारण उनले गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।तर सुशान्तसिंह राजपुतले देहत्याग गरेको नभई उनको ह त्या गरिएको आशंका परिवारले गरेका छन्। उनका परिवारले राजपुतले देहत्याग गरेको नभएर उनको ह त्या गरिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
कैयौँ चलचित्रमा खेलेका राजपुत आइतबार मुम्बाई बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा झु ण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीले पनि उनको देहत्याग भएको बताएको थियो।
तर राजपुतका मामा आरसी सिंहले सोमबार भनेका छन्,‘उनले देहत्याग गरेको भन्ने बारेमा हाम्रो विश्वास छैन, हामी परिवारका सदस्यहरुले यसको विरोध गरेका छौँ उनको ह त्या भएको छ प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरोस्।’
बिहारका प्रहरी कमिसनर मनोज सिंहले घटनाको प्रकृति हेर्दा अहिलेसम्म देहत्याग नै गरेको जस्तो देखिएको बताएका छन्। भारतीय चलचित्र क्षेत्रका नायक राजपुतका मामा तथा आफन्तहरुले उनले देहत्याग गर्ने कुनै कारण नरहेको भनेका छन् भने प्रहरीले देहत्याग गरेको बारेमा कुनै सु साइड नोट पनि नभेटिएको बताएको छ।
आजबाट पशुपतिमा आरती अघि पनि राष्ट्रिय धुन बजाउनु पर्ने, पर्यटन मन्त्री भट्टराईले दिए निर्देशन
स्कुल संचालन र एसइई परीक्षाको बारेमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरे यस्तो घोषणा !
कालापानीसम्मै छैन हाम्रो पहुँचः नेपाली सुरक्षाकर्मीले समेत कालापानी टेक्न पाउँदैनन्